Taliyihii Ciidamada Booliska Ee Gobolka Saraar Oo Xilkii Ku Wareejiyey Taliye Cusub Oo Gobolkaasi Loo Magcaabay.
Sunday February 11, 2018 - 15:28:30 in Wararka by Halgan News
Caynaba(Halgan)Taliyihii Ciidamada Booliska ee Gobolka Saraar Gaashaanle Dhexe Mursal Xaaji Warsame Sugule ayaa maanta xilkii taliyenimo ee uu gobolkaasi ka hayey ku wareejiyey taliyaha cusub ee dhowaan loo soo magcaabay gobolka Saraar.
Taliye Mursal ayaa hadalo kooban oo uu kusoo dhoweynaayey taliyaha cusub ka jeediyey munaasibaddii xil wareejinta oo ka dhacday caasimadda gobolka Saraar ee Caynaba.
Waxa isna halkaasi hadal kooban oo uu xilka kula wareegaayey ka jeediyey taliyaha cusub ee ciidamada Booliska gobolka Saraar loo soo magcaabay Gaashaanle Dhexe Xasan Ismaaciil Yuusuf ( Gacmayare ) oo uga mahadceliyey taliyaha xilka wareejiyey soo dhoweyntiisa .
Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah bulshadda gobolkaasi Saraar oo si weyn usii sagootiyey taliyihii hore ee ciidamada Booliska Gobolka Saraar Gaashaanle Dhexe Mursal Xaaji Warsame Sugule, iyaga oo soo dhoweeyey taliyaha cusub ee Ciidamada Booliska gobolka Saraar loo soo magcaabay Gaashaanle Dhexe Xasan Ismaaciil Yuusuf.
Hoos Ka Daawo Warkan.